eBird birders देखि चरा मा डाटा संकलन; स्वयंसेवकहरु कुनै अनुसन्धान टोली मेल गर्न सक्छन् कि भौगोलिक मापन प्रदान गर्न सक्छ।
चरा जताततै छन्, र ornithologists जहाँ हरेक बर्ड हरेक क्षण छ जान्न चाहनुहुन्छ। यस्तो सिद्ध डेटासेटको दिइएको, ornithologists आफ्नो क्षेत्र को धेरै आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ सक्छ। निस्सन्देह, यो डाटा सङ्कलन कुनै पनि विशेष शोधकर्ता को स्कोप परे छ। ornithologists धनी र अधिक पूरा डाटा इच्छा समान समयमा, "birders" -people मजा-गर्दै निरन्तर चरा अवलोकन र तिनीहरूले के हेर्न दस्तावेजीकरण लागि हेर्दै चरा जाने जो। यी दुई समुदाय सहयोग को इतिहास लामो छ, तर अब यी सहयोग डिजिटल उमेर द्वारा कायापलट भएको छ। eBird संसारभरि birders जानकारी माग्दछन् एक वितरण डाटा संग्रह परियोजना हो, र यो पहिले नै 260 करोड भन्दा बढी चरा sightings 2,50,000 सहभागीहरू प्राप्त छ (Kelling et al. 2015) ।
eBird लन्च अघि birders द्वारा सिर्जना डाटा को धेरै उपलब्ध अनुसन्धानकर्ताहरूले थियो:
"आज संसारभरि closets हजारौं असंख्य नोटबुक, सूचकांक कार्ड, एनोटेट चेकलिस्ट, र डायरीहरू ढाँट्छन्। birding संस्थाहरु संग मुछिनुभएको हामीलाई ती राम्रो 'मेरो लेट मामा गरेको बर्ड रेकर्ड' हामीलाई थाहा तिनीहरूले हुन सक्छ कसरी मूल्यवान बारेमा फेरि माथि सुनवाई र को हार थाह छ। दुःखको कुरा, हामी पनि हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्दैन थाहा छ। " (Fitzpatrick et al. 2002)
बरु भएको यो बहुमूल्य डाटा प्रयोग नगरिएको बस्न भन्दा, eBird birders एक केंद्रीकृत, डिजिटल डाटाबेस अपलोड गर्न सक्षम बनाउँछ। जो, जहाँ, जब, के प्रजाति, कति, र प्रयास: eBird गर्न अपलोड गरिएको डाटा छ कुञ्जी क्षेत्रहरू छन्। गैर-birding पाठकहरु को लागि, "प्रयास" अवलोकन बनाउन गर्दा प्रयोग विधि बुझाउँछ। डेटा गुणस्तर चेक डाटा अपलोड पनि अघि थाल्छन्। असामान्य रिपोर्ट-यस्तो धेरै दुर्लभ प्रजाति रिपोर्टहरू रूपमा, धेरै उच्च गणना, वा सिजन बाहिर रिपोर्ट-छन् फ्ल्याग, र वेबसाइट स्वतः यस्तो फोटो रूपमा, थप जानकारी को अनुरोध पेश गर्न प्रयास Birders। यो थप जानकारी सङ्कलन गरिसकेपछि, फ्ल्याग रिपोर्ट थप समीक्षा लागि स्वयंसेवक क्षेत्रीय विशेषज्ञहरु सयौं एक पठाइएका छन्। को birder-झण्डा लगाइएका प्रतिवेदन क्षेत्रीय विशेषज्ञ-सहित सम्भव थप पत्राचार गरेर अनुसन्धान पछि त अविश्वसनीय रूपमा खारेज गरियो वा तिनीहरूले eBird डेटाबेस मा प्रवेश गर्दै (Kelling et al. 2012) । जांच अवलोकन को यो डेटाबेस त उपलब्ध इन्टरनेट जडान संग संसारमा कुनै बनेको छ, र हालसम्म झन्डै 100 साथीहरूको-समीक्षा प्रकाशनहरू यसलाई प्रयोग गरेका छन् (Bonney et al. 2014) । eBird स्पष्ट स्वयंसेवक birders वास्तविक ornithology अनुसन्धान को लागि उपयोगी छ भन्ने डाटा संकलन गर्न सक्षम छन् भनेर देखाउँछ।
eBird को सुंदरियों को एक पहिले नै भइरहेको-यो मामला, birding छ "काम" कब्जा छ। यो सुविधा अथाह मात्रा हासिल गर्न परियोजना गर्न सक्षम बनाउँछ। तर, birders गरेको "काम" ठीक ornithologists द्वारा आवश्यक डाटा मेल खाँदैन। उदाहरणका लागि, eBird मा, डाटा संग्रह birders को स्थान चरा को स्थान निर्धारण गरिन्छ। यो उदाहरणका लागि, सबै भन्दा अवलोकन सडक नजिक उत्पन्न गर्छन, अर्थ (Kelling et al. 2012; Kelling et al. 2015) । ठाउँ भन्दा प्रयासको यो unequal वितरण गर्न साथै, birders गरेका वास्तविक अवलोकन सधैं आदर्श हो। उदाहरणका लागि, केही birders मात्र तिनीहरूले बरु तिनीहरूले पालन सबै प्रजाति जानकारी अपलोड भन्दा रोचक विचार भनेर प्रजाति बारेमा जानकारी अपलोड गर्नुहोस्।
eBird अनुसन्धानकर्ताहरूले यी डाटा गुणस्तर मुद्दाहरू दुई मुख्य समाधान, मुद्दाहरू धेरै अन्य वितरण डाटा संग्रह परियोजनामा ​​उत्पन्न छ। पहिलो, eBird अनुसन्धानकर्ताहरूले निरन्तर birders द्वारा पेश डाटा गुणस्तर स्तरवृद्धि गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, eBird प्रदान गर्दछ सहभागीहरूलाई शिक्षा, र यो सबै प्रजाति तिनीहरूले पालन कि, केवल उपसमूह बारेमा जानकारी अपलोड गर्न प्रत्येक सहभागी डेटा, आफ्नो डिजाइन द्वारा, birders प्रोत्साहन भन्ने दृश्यावलोकनहरू सिर्जना गरेको छ (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) । दोस्रो, eBird अनुसन्धानकर्ताहरूले कच्चा डाटा को हल्ला र heterogeneous प्रकृति लागि सच्याउन प्रयास तथ्याङ्क मोडेल प्रयोग गर्नुहोस्। यी तथ्याङ्क मोडेल पूर्णतया डाटा देखि पक्षपात हटाउन भने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन, तर ornithologists उल्लिखित गरिएको थियो, यो लगभग 100 साथीहरूको-समीक्षा वैज्ञानिक प्रकाशनहरू प्रयोग गरिएको छ कि, समायोजित eBird डाटा गुणस्तर पर्याप्त विश्वस्त छौं।
तिनीहरूले पहिलो पटक eBird बारेमा सुन्दा धेरै गैर-ornithologists सुरुमा अति नै संदेह छन्। मेरो विचारमा, यस शंका भाग गलत तरिकामा eBird सोचिरहेका आउँछ। धेरै मानिसहरू पहिलो लाग्छ "को eBird डाटा सिद्ध छ?", र उत्तर बिल्कुल छैन। तर, त्यो छैन सही प्रश्न छ। सही प्रश्न छ, "केही अनुसन्धान प्रश्न लागि, eBird डाटा ornithology डाटा अवस्थित भन्दा राम्रो छ?" जवाफ हो, भाग चासो धेरै प्रश्नहरूको लागि त्यहाँ वितरित डाटा संग्रह गर्न कुनै व्यावहारिक विकल्प छ किनभने निश्चित छ कि प्रश्न लागि।
यो eBird परियोजना महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक डाटा को संग्रह मा स्वयंसेवकहरु समावेश गर्न सम्भव छ भनेर देखाउनुहुन्छ। तर, eBird, र सम्बन्धित परियोजनाहरु, नमूना र डाटा गुणस्तर सम्बन्धित चुनौतीहरू वितरण डाटा संग्रह परियोजनाका लागि चिन्ता हो भनेर संकेत गर्छ। हामी अर्को खण्डमा तथापि, चतुर डिजाइन र प्रविधि यी चिन्ता केही सेटिङहरू मा न्यून पारिएको सकिन्छ देख्नेछन्।